အဝေးမှာ ပညာရှာနေတဲ့ မြေးမလေး ဝင်းဝါပန်းမြတ်သူရဲ့ အသက် (၁၇) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက် မေတ္တာတွေများစွာနဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ဝါဝါဝင်းရွှေ - TGI Daily News
မင်းသမီးကြီး ဝါဝါဝင်းရွှေကတော့ အဖြူအမည်း ဖလင်ခေတ်ကတည်းက လျှမ်းလျှမ်းတောက်ကျော်ကြားတဲ့ မင်းသမီးကြီးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်သလို အမျိုးသမီးဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ အကယ်ဒမီဆုများစွာကိုလည်း လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဝါဝါဝင်းရွှေက အခုဆိုရင် အသက်ခုနှစ်ဆယ်ကျော်အရွယ်ကို ရောက်ရှိနေပြီး သူမဝါသနာပါတဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေအပေါ်ကိုတော့ သံယောဇဉ်မပြတ်နိုင်သေးသူဖြစ်ပါတယ်။ ဝါဝါဝင်းရွှေကတော့ သူမကိုယ်တိုင် အသွေးအသားထဲက မြတ်နိုးတဲ့ အနုပညာအမွေတွေကို သားသမီးမြေးတွေရတဲ့အထိ လက်ဆင့်ကမ်းပေးထားနိုင်သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ဒီဇင်ဘာလ (၁၂) ရက်နေ့ကတော့ ဝါဝါဝင်းရွှေရဲ့ သား ဝင်းထွဋ်ဝင်းရဲ့ သမီးငယ်လေးဖြစ်သူ ဝင်းဝါပန်းမြတ်သူရဲ့ အသက် (၁၇) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝါဝါဝင်းရွှေကတော့ မြေးမလေးအတွက် “သိပ်ချစ်ရတဲ့ မြေးလေး Pinky ပန်း သွေး HAPPY BIRTHDAY. HAPPY LONG LIFE . ဒီနှစ်မွေးနေ့ မှာ တော့ ဖွားတို့နဲ့ ဝေးတဲ့ Singapore နိုင်ငံမှာရောက်နေရှာပြီပေါ့။ ငယ်စဉ်အခါ ပညာရှာ။ ဆိုတဲ့အတိုင်း ၊မြေးလေးရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ အားလုံးပြည့်စုံပါစေ။ သွားလေရာ အန္တရယ်ကင်းလို့ ဘေးရှင်းပါစေ။ သူတော်ကောင်းများနဲ့သာ တွေ့စုံပါစေ။လို့ ဖွားဖွား မေတ္တာပို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။” ဆိုပြီး အမှတ်တရ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလာခဲ့ပါတယ်။
ဝါဝါဝင်းရွှေနဲ့ မြေးမလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဝါရွှေနွယ်သွေးဝင်းနဲ့ ဝင်းဝါပန်းမြတ်သူတို့ကတော့ ဖွားဖွားကြီးရဲ့ အချောအလှတွေကို စုပြုံပြီးရရှိထားကြတာမို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝ ရရှိထားသူလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ဒီကနေ့ရဲ့ မွေးနေ့ရှင်လေး Pinky လေးအတွက် အမှတ်တရ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Source: Wa Wa Win Shwe
အဝေးမှာ ပညာရှာနတေဲ့ မွေးမလေး ဝငျးဝါပနျးမွတျသူရဲ့ အသကျ (၁၇) နှဈပွညျ့မှေးနအေ့တှကျ မတ်ေတာတှမြေားစှာနဲ့ မှေးနဆေု့တောငျးပေးခဲ့တဲ့ ဝါဝါဝငျးရှေ
မငျးသမီးကွီး ဝါဝါဝငျးရှကေတော့ အဖွူအမညျး ဖလငျခတျေကတညျးက လြှမျးလြှမျးတောကျကြျောကွားတဲ့ မငျးသမီးကွီးတဈယောကျလညျးဖွဈသလို အမြိုးသမီးဒါရိုကျတာတဈယောကျဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ အကယျဒမီဆုမြားစှာကိုလညျး လကျဝယျပိုငျဆိုငျနိုငျခဲ့တဲ့ ဝါဝါဝငျးရှကေ အခုဆိုရငျ အသကျခုနှဈဆယျကြျောအရှယျကို ရောကျရှိနပွေီး သူမဝါသနာပါတဲ့ အနုပညာအလုပျတှအေပျေါကိုတော့ သံယောဇဉျမပွတျနိုငျသေးသူဖွဈပါတယျ။ ဝါဝါဝငျးရှကေတော့ သူမကိုယျတိုငျ အသှေးအသားထဲက မွတျနိုးတဲ့ အနုပညာအမှတှေကေို သားသမီးမွေးတှရေတဲ့အထိ လကျဆငျ့ကမျးပေးထားနိုငျသူပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကနေ့ ဒီဇငျဘာလ (၁၂) ရကျနကေ့တော့ ဝါဝါဝငျးရှရေဲ့ သား ဝငျးထှဋျဝငျးရဲ့ သမီးငယျလေးဖွဈသူ ဝငျးဝါပနျးမွတျသူရဲ့ အသကျ (၁၇) နှဈပွညျ့ မှေးနလေ့ေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဝါဝါဝငျးရှကေတော့ မွေးမလေးအတှကျ “သိပျခဈြရတဲ့ မွေးလေး Pinky ပနျး သှေး HAPPY BIRTHDAY. HAPPY LONG LIFE . ဒီနှဈမှေးနေ့ မှာ တော့ ဖှားတို့နဲ့ ဝေးတဲ့ Singapore နိုငျငံမှာရောကျနရှောပွီပေါ့။ ငယျစဉျအခါ ပညာရှာ။ ဆိုတဲ့အတိုငျး ၊မွေးလေးရဲ့ ရညျမှနျးခကျြတှေ အားလုံးပွညျ့စုံပါစေ။ သှားလရော အန်တရယျကငျးလို့ ဘေးရှငျးပါစေ။ သူတျောကောငျးမြားနဲ့သာ တှစေုံ့ပါစေ။လို့ ဖှားဖှား မတ်ေတာပို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။” ဆိုပွီး အမှတျတရ မှေးနဆေု့မှနျကောငျးတောငျးပေးလာခဲ့ပါတယျ။
ဝါဝါဝငျးရှနေဲ့ မွေးမလေးနှဈယောကျဖွဈတဲ့ ဝါရှနှေယျသှေးဝငျးနဲ့ ဝငျးဝါပနျးမွတျသူတို့ကတော့ ဖှားဖှားကွီးရဲ့ အခြောအလှတှကေို စုပွုံပွီးရရှိထားကွတာမို့ ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျမှုကို အပွညျ့အဝ ရရှိထားသူလေးတှေ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး ဒီကနရေဲ့ မှေးနရှေ့ငျလေး Pinky လေးအတှကျ အမှတျတရ မှေးနဆေု့တောငျးပေးခဲ့ကွပါဦးနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။